भिजन सेक्युरिटिजको शाखा बिस्तार, सेयर कारोबार गर्न सहज - समृद्ध नेपाल
भिजन सेक्युरिटिजको शाखा बिस्तार, सेयर कारोबार गर्न सहज
काठमाडौं । भिजन सेक्युरिटिज प्रालि नवलपुरको कावासोतीका साथै तनहुँको दमौली र म्याग्दीको बेनीमा पनि शाखा बिस्तार गरेको छ केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहेको उक्त ब्रोकरले यसअघि रुपन्देहीको भैरहवा र काभ्रेको बनेपामा पनि शाखा बिस्तार गरिसकेको छ । उक्त शाखा बिस्तारसँगै ५० वटा ब्रोकरमध्ये सबैभन्दा शाखा भएको ब्रोकर समेत बनेको छ ।
पछिल्लो समयमा धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताको चासो र संख्या बढेसँगै कम्पनीले शाखा बिस्तार गरेको हो । नवलपुरको कावासोतीको शाखा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले गत वैशाख ५ गते उद्घाटन गरेका थिए । यो पनि यसभन्दा अघि सोही अध्यादेशलाई गत पुस ५ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न राष्ट्रपति
भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भएको थियो । सो अध्यादेशको अवधि यही वैशाख २३ गते सकिने भएपछि सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्त पाएकालाई बचाउ गर्नका लागि सो अध्यादेशलाई पुनः जारी गरेको बताइएको छ । सो अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका निकायमा ३९ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो ।
दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषण सुरु हुने !
उदयपुर नेकपा नेताको ‘फेक आईडी’ बनाएर रकम असुल्ने एक युवा पक्राउ !
करण जोहरको खुलासाः पुरुष बन्नका लागि तीन वर्षको तालिम लिएँ
भागीरथीकी आमा द्रोपती पछुताउँदै भन्छिन्, ‘त्यही दिनको ३, ४ बजेतिर…!’
शरीर दान दिने घोषणा गर्दै सत्यमोहन जोशी दम्पती
‘ला! मैले गाएको सुनेर कति सहिद भए होलान्! त्यसको पाप त लाग्दैन नि मलाई!’
गायिका मिलन अमात्य लुटिइन् !
हाम्रा प्रधानमन्त्रीले किन देखाउन खोजेका होलान् भिडको शक्ति?
यात्रुलाई अलपत्र छाडेर पानीजहाजबाटै हाम फाले क्याप्टेन !
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०% र बीमा कम्पनीले एक चाैथाई कर्मचारी मात्रै काममा खटाउनुपर्ने
चर्चित ‘टाइटानिक’ फिल्म खेलेर चर्चा कमाएका ज्याक र रोज अहिले यस्ता भएका छन !